Inona no Hataoko fa Tereny Hanao Firaisana Aminy Aho?
HAMAKY AMIN'NY TENY Abbey Abkazianina Abui Acholi Afrikaans Albaney Alemà Altaï Alur Anglisy Arabo Armenianina Asamey Attié Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bambara Baoulé Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Biak Bichlamar Bicol Boligara Boulou Bété Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuuk Cinamwanga Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Dayak Ngaju Digor Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Garifuna Gokana Goujrati Goun Grika Guarani Guerze Guéré Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Isoko Italianina Japoney Javaney Jula Kabiyè Kabuverdianu Kabyle Kachin Kambôdzianina Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabo) Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kissi Kongo Konkani (Romanina) Koreanina Kosrae Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Guinée-Bissau Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Lamba Laosianina Lenje Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Marshall Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Norvezianina Nsenga (Zambia) Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Sirilika) Palau Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pendjabi (Shahmukhi) Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quiché Romanianina Rosianina Rotumien Runyankore Rutoro Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Samoanina Sangir Sango Sena Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tandroy Tankarana Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanana Vietnamianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tongan Toraja Totonac Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yacouba Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Édo Éwé
Ho potika ny hoavinao raha tsy misaina tsara ianao fa manaonao foana.
Vao roa volana izay i Hasina sy Rado no niaraka, nefa hoatr’ireny efa niaraka firy taona ireny! Tsy tapitra akory aza ny tenin’ny anankiray, dia efa hain’ny iray ny tohiny. Mifandefa SMS foana ry zareo, ary mifampiantso ela be. Tsy resaka intsony anefa izao no tadiavin’i Rado fa zavatra hafa.
Nifampitantana sy nifanoroka kely fotsiny izy roa, talohan’izao. Tena tsy te hihoatra an’izay i Hasina, nefa matahotra koa izy sao hisarahan’i Rado. Izy irery mantsy no mba miteny aminy hoe manja kely izy sady tsy misy hoatr’azy. Mieritreritra àry izy hoe: ‘Koa inona moa ny olana e? Izahay tsinona mifankatia!’
Efa ampy taona angamba ianao, ka efa afaka mampiaraka. Inona no ho nataonao raha ianao no Hasina?
Fanomezana avy amin’Andriamanitra ny firaisana, fa natao ho an’ny mpivady ihany. Tsy asianao vidiny ilay fanomezana, raha manao firaisana amin’olona mbola tsy vadinao ianao. Hoatran’ny hoe nomen’olona akanjo tsara tarehy ianao, nefa ataonao famafana vovoka ilay izy
Natao hisotro rano ny olombelona, ka mety ho faty raha tsy manaraka an’izany. Hoatr’izay koa fa asain’ny Baiboly ‘mifady ny fijangajangana’ isika. (1 Tesalonianina 4:3) Ratsy foana ny vokany raha tsy arahina izany, satria efa izay no lalàna nataon’Andriamanitra.
Inona ny vokany raha tsy mankatò an’io lalàna io ianao? Hoy ny Baiboly: ‘Manota amin’ny vatany ihany ny mpijangajanga.’ (1 Korintianina 6:18) Inona ny dikan’izany?
Hitan’ny mpikaroka fa maro amin’ny tanora efa nanao firaisana talohan’ny fanambadiana no...
MANENINA. Ny ankamaroany mihitsy no mahatsapa an’izany.
TSY MIFAMPATOKY. Samy miady saina izy roa hoe: ‘Sao dia mba efa nanao firaisana tamin’ny olon-kafa koa àry izy?’
DISO FANANTENANA BE. Maro ny ankizivavy diso fanantenana any anatiny any, satria ilay ankizilahy nantenainy hiaro azy indray no nanararaotra azy. Matetika koa no tsy tena tian’ny ankizilahy intsony izay ankizivavy nanaiky hanao firaisana taminy.
Tadidio àry izao: Tena sarobidy ny vatanao ka aza omemena olona fotsiny. Tsy asianao vidiny ilay izy, raha manaiky hanao firaisana alohan’ny fanambadiana ianao.—Romanina 1:24.
Asehoy fa vitanao ny mankatò an’ilay hoe ‘mifady ny fijangajangana.’ (1 Tesalonianina 4:3) Aza maika fa mbola ho afaka hanao firaisana foana ianao rehefa manambady. Tsy hanenina na hiady saina toa an’ireo tanora nanao firaisana alohan’ny fanambadiana ianao amin’izay, fa mba tena hankafy an’ilay izy.—Ohabolana 7:22, 23; 1 Korintianina 7:3.
Raha olona tena tia anao ve, dia handeha hanimba ny vatanao sy hanao izay hampalahelo anao?
Raha tena tia anao ve izy, dia hataony izay hampahatezitra an’Andriamanitra aminao?—Hebreo 13:4.
HO AN’NY ANKIZIVAVY
Be dia be ny ankizilahy miteny hoe tsy hanambady ankizivavy efa nanaovany firaisana. Aleony, hono, ankizivavy virjiny!
Gaga angamba ianao maheno an’izany na tezitra mihitsy. Tadidio fa amin’ny filma fotsiny no mody aseho hoe mahafinaritra sy tsy mampaninona ny manao firaisana alohan’ny fanambadiana, sady hoatran’ny hoe tsy tena mifankatia raha tsy manao an’izany.
Aza manaiky hofetsifetsena anefa! Tia tena ilay ankizilahy matoa manambitamby anao hoe hanao firaisana, nefa ianareo tsy mpivady akory.—1 Korintianina 13:4, 5.
HO AN’NY ANKIZILAHY
Raha misy ankizivavy miaraka aminao, dia eritrereto hoe: ‘Tena tia azy ve aho? Raha izany, inona no tena tokony hataoko?’ Asehoy azy fa mahavita mankatò ny lalàn’Andriamanitra ianao. Asehoy koa fa hendry ianao, ka ialanao izay zava-drehetra mety hahatonga anareo hanaonao foana. Porofoy fa tia azy ianao, ka tsy manao izay tianao fotsiny.
Ho faly be ilay ankizivavy amin’izay, sady vao mainka ho tia anao. Hiteny hoatran’ilay Solemita tena hendry izy hoe: “Ahy ny malalako, ary azy aho.”—Tononkiran’i Solomona 2:16.
Rehefa misy manambitamby anao hoe: “Eo moa raha tena tia an’ahy ianao e”, dia valio hoe: “Ka raha tena tia an’ahy koa ianao, dia tsy hisisika amin’izany!”
Izao tadidina rehefa miaraka amin’ny ankizilahy na ankizivavy ianao: Raha zavatra tsy sahinao atao eo imason’ny dadanao sy mamanao, dia aza atao.
Izao no holazaiko rehefa misy manambitamby an’ahy mba hanao firaisana aminy:
Rehefa inona no tena hitako hoe sarotra ilay mandà?
Izao no hataoko mba hialana amin’izany:
Hainao ve ny Manazava ny Hevitrao Momba ny Firaisana?